Dhacdo naxdin leh oo ka dhacday Muqdisho - Awdinle Online
Dhacdo naxdin leh oo ka dhacday Muqdisho
Dhacdo Argagax leh oo ka dhacday Magaalada Muqdisho!
Mid ka mid ah xaafadaha ku yaalla Magaalada Muqdisho waxaa ka dhacday Arrin layaab leh gabar ayaa loo soo gargaraacay guriga waxa ay tiri yaa waaye? Waxa uu ula cod ekaaday qofka la hadlay walaalkeed oo ay guriga ku wada nool yihiin, ka dib waxa ay u dhaqaaqday dhanka albaabka si ay u furto.
Gabadha marka ay furtay albaabka waxaa ka soo hor baxay nin aan aheyn walaalkeed oo aad ugu soo dhawaaday markaas ayaa caadi ugu danbeysay maskaxdeeda ka dib waxa ay raacday ninkii abaabka ay ka furtay oo xakeystay, maalmo ayay xaafadeeda ka maqneyd oo la waysanaa ugu danbeyn waxaa la soo dhigay gurigooda hortiisa iyada oo dhaawac ah, waxaa loo qaaday isbitaal marka la baaray waxaa cadaatay in laga baxsaday hal kili, waxa ay hadda jiiftaa mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho oo lagu daaweynayaa.
Qaraabada gabdhaha ayaa sheegay in wali ay layaaban yihiin sida ay wax u dhaceen ayna ku dabo jiraan falka gabadhooda lagula kacay ee looga saaray mid ka mid ah kiliyaheeda waliba iyada oo la indho sarcaadiyay.
Dhacdooyinka kiliyalaha, Wadnaha iyo Carruurta La xado ayaa ah mid maalmahan laga hadal haayo Magaalada Muqdisho
W/Q Nasriin Maxamed Ibraahin
Previous articleShir u socdo Madaxda Sirdoonada Soomaaliya, Itoobiya & Ereteriya
Next articleMadaxda Dowladda oo ku loolamaya Magacaabista Golaha Wasiirada Soomaaliya